Oge opupu ihe ubi na-eweta ọghọm | Rayson
Ọdịmma na-enweghị atụ
Rayson edobela otu na-eme ihe na mmepe ngwaahịa. N'ihi mbọ ha, anyị enweela ọghọm matrageda ndị opupu ihe ubi na atụmatụ iji ree ya na ahịa ndị mba ofesi.
Na ndị ọrụ mmepụta ihe zuru oke na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson nwere ike ịhazi onwe ya, zụlite, na nwalee ihe niile dị ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ọghọm matragent, kpọọ anyị ozugbo.
Ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson mmiri na-agbasa ike na arụmọrụ ọrụ dị elu. Ọzọkwa, anyị ebilitela nke ọma RENT R & D siri ike R & D siri ike, nke na-eme ka anyị nwee ike ịmalite ngwaahịa ọhụrụ dị ka ọghọm mattunda ma na-eduzi anyị na-eduzi. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ndị ahịa na-enye afọ ojuju dịka ọkachamara na ngwa ahịa ahịa. Anyị na-anabata ajụjụ gị na nleta ala.